China 1060 Aluminum Circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny 1060 Aluminium Circle dia legioma mifototra amin'ny alim-pandihizana ao amin'ny fianakaviana "komandy tsotra" (1000 na 1xxx). Izy io dia tena mitovy amin'ny 1050 alignement, miaraka amin'ny fahasamihafana manomboka amin'ny 0.1% aluminium amin'ny lanjany. Na izany na izany, na 1050 sy 1060 na XNUMX aza dia voarakotry ny standard d'ISO, dia raketin'ny fenitra ASTM samihafa izy ireo.
Amin'ny maha-raozy azy, dia matetika izy io no mamolavola na manodina. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny orinasa herinaratra elektrika sy simika, noho ny fananana fitarihana herinaratra avoakany, ny fanamafisana ny fahasimbana, ary ny fahaiza-miasa. Manana herim-batana ambany izy io raha ampitahaina amin'ny vy metaly. Mety hiantehitra amin'ny asa mangatsiaka izy, fa tsy amin'ny fitsaboana hafanana.
Product Discription Hot sale 1060 H14 aluminium circle 1060 H14 Aluminum sheet circle from China Details Quick Details Grade: 1000 Series Temper: O-H112 Type: Disc Application: Aircraft, Marine, and Commercial Grade Parts Thickness: 0.4mm-6mm Width: As Per Ny fangataham-bokan'ny mpanjifa na tsia: Modely tsy mahazatra: Model 1060: 10-1500mm Sample: Free sy Fast Surface: Packing mill Finishing & Shipping Our Service • Manolotra entana miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana sy ny tolotra tsara indrindra isika. · Manana teknika ara-teknika sy tekinikan'ny famokarana teknika avo lenta izahay. · Manana fandresena isika ...